ATN: Leave Me Alone, Please!
အန်ကယ်ရေ့ ကျနော်လည်း သွားတော့ကြည့်တယ် ကိုယ်မသိတဲ့ ဘလော့တွေများလို့ ၂ ခုလောက်ပဲ Vote ခဲ့တယ်း) ရင်ဘတ် တူရာ... ရဲဘော်... မိတ်ဆွေ.တွေထဲမှာ ကျနော်လည်းပါတယ် ။ဆုရရ မရရ အန်ကယ့်စာတွေဖတ်ပြီး လာဖတ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်ကြောင်းး ။ မုန့်မကျွေးလည်း လာမယ်နော့် :P
ကြောက်လိုက်တာ အစ်ကိုရယ်. ။ အလန့်တကြားမလုပ်ပါနဲ့၊ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး မလာရဲလို့ အသာလေး ခြေဖျားထောက်လာရတယ်။
တူမောင်မျိုး - ဆွေမျိုးထဲမှာ ငါ့တူပါတယ်လေး)
မခင်ဦးမေ - မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ.. သေနတ်လည်း မဖောက်မိပါဘူး...
ရော့နော်..အလုံးထားခဲ့တယ်။ ဘော်လုံး။
ူleave me aloneဆိုလို့ :P
အိမ်မှာ ထမင်းများ မကျက်သေးတာလား...လား..လား..လား...???????
အကိုတို့ ချိုသင်းတို့တွေက စာရေးရရင်ကို ပျော်နေလို့ ရေးနေကြတာ သိသာပါတယ်လေ။
ချိုသင်းလဲ ဒီဘလော့ဂ်လေး လုပ်မိပါမှ ကိုယ်ရေးချင်တာလဲ ရေးရ၊ ကိုယ့်မောင်နှမတွေလို ချစ်ရတဲ့ အကို အမ ညီ ညီမတွေလဲ ရ ဆိုတော့ ဒါကိုက တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုပါပဲ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရောင့်ရဲ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။
ကြည့်ပါလား.. အပေါ်မှာ ရေးသွားကြတဲ့ အမတွေ ညီမတွေကို။ မချစ်ဘယ်သူနေပါ့မယ် အကိုရယ်။
လန့် လိုက်တာ... ကလူ.. ကလူ...
Butterfly come back....
Blog များ ပိတ်တော့ မလို့ လားလို့ ...
ဟူးးးးး... ခုတော့ တော်ပါသေးရဲ့ 
မ Vote နဲ့ဆိုလဲ မ Vote ပါဘူး အကိုတော်ရယ်...
AK ကြီး ကိုလဲ ကြောက်ပါတယ်... :-P
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက် ဆုတွေပိုက်ဆံတွေ ဂုဏ်တွေထက် အစ်ကိုခံစားမှု အနုပညာသာ ပိုဖတ်ခြင် ပိုတွေးခြင်းကြောင်း
မောင်ပိစိ ပြလို့ ရောက်လာတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးပြီးရေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ညီမလည်း mail ပို့ပြီး နာမည်မထည့်ဖို့ ပြောလိုက်မိတယ်။
ကျွန်တော်လည်းရောက်ခဲ့တယ်။ စပ်၂စု၂နဲ့ပေါ့ သိတဲ့ ပရို(၄)ယောက်လောက်ကို (မkomအပါ) အကြိုက်ပေးခဲ့သေးတယ်။
ဒို့ကိုကြီးကလည်း အစိတ်လျှော့ အစိတ်လျှော့ အခုတလော ဘာတွေမှန်းတော့မသိဘူး။ဘလော့တွေ မှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။ ဘယ်သူက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဘတ်တူရာ ထဲမှာ ကျွန်တော်လဲပါတယ်နော်။ ကိုကြီးအောင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ......:D
ပေးရင်လဲ ယူလိုက်ပေါ့ဗျာ။ နာမည်၊ အိမ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း အကုန်ပေးလိုက်ပေါ့။ ဟဲ။ ကိုအောင်သာငယ်တို့က ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ လူသိပြီးသားပဲ။ လူမသိသေးတဲ့သူတွေကို နှိုက်ထုတ်တာလားမသိဘူး။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်ရေးချင်တာ ရေးချင်လို့ ဘလော့ရေးပါတယ် ဆိုမှ
လာပြီး ဘာဘလော့ ညာဘလော့ခွဲနေသေးတယ် ..
ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ရေးချင်တာရေးဘို့ လေ....
အကိုရေ ရင်ဖွင့်တာ လာကြည့်သွားတယ်..။
mm - ကျေးဇူးပါ...
sin dan lar - အသာ လုပ်ပါဗျာ...
Moe Cho Thinn - ဟုတ်ပါ့ ညီမရေ့...
သက်ဝေ - ဘလော့တော့ မပိတ်ပါဘူးဗျ...
ကိုမျိုးဝင်းဇော် - ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
ရွှန်းမီ - လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးချင်တာပါပဲ...
mirror - စာပဲဖတ်...း)
ကိုဝင်းဇော် - ကျနော့် မပေး ပြီးတာပဲဗျာ...း)
mg kyi poae - ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီရေ့...
ကလူသစ် - အေးလေဗျာ...
ဆောင်းယွန်းလ - အတူတူပါပဲ ညီရေ့...
မခင်မင်းဇော် - ဟုတ်ပါ့ဗျာ...
ကိုသစ် - အတူတူပဲလေဗျာ...
လင်းထက် - ကျေးဇူး ညီရေ့...
အခုတလောတယောက်ထဲပတ်ရှုပ်နေလို့မရောက်ဖြစ်ဘူး အကိုရေ။ အင်း အခုတလော ဒီကိစ္စ လူပြောများနေတယ် ။ ထားပါတော့လေ ဥာဏ်မမှီလို့ဝင်မဆွေးနွေးတော့ဘူး။
Leave me alone ဆိုလို့ဘာများဖြစ်ပါလိမ့် ဆိုပြီး ပြူးပြဲဖတ်နေတာ အဟဲ ဘာမှမပူနဲ့ကိုကြီးအောင်ရေ အလုံးလိုက်ကြီးကို ထားခဲ့တယ်ဗျ။ ဘာလုံးလည်းတော့ တားလည်းတိဘူး။